के हो पल्स अक्सिमिटर ! कसरी प्रयोग गर्ने ? #Oximeter • Health News Nepal
Pulse Oximeter Used to Measure Pulse Rate and Oxygen Levels, के हो पल्स अक्सिमिटर ! कसरी प्रयोग गर्ने ? #Oximeter
दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितलाई अक्सिजन आवश्यकता परिरहेको छ । पहिलो लहरको समयमा अक्सिजनको आवश्यकता परेको थिएन । अहिलेका अधिकांश बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता परिरहेको छ । अक्सिजनको मात्रा घट्दै जाँदा उनीहरूमा एकाएक बेहोस हुने, स्वाश–प्रश्वासमा समस्या हुने देखिइरहेको छ ।
दोस्रो भेरियन्टको कोरोना भाइरसले बिरामीमा अक्सिजनको कमी देखाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा होम आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले कसरी थाहा पाउने त आफूमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर? त्यस्तो अवस्थामा घरमै बसेका बिरामीले अक्सिजनको मात्रा थाहा पाउनका लागि अक्सिमिटरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
Oxygen level at home – what how, अक्सिमिटर
अक्सिमिटरको सहायतामा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा थाहा पाउन सकिन्छ । एक स्वस्थ व्यक्तिमा अक्सिजनको तह ९५ देखि लिएर १०० को बीचमा हुने गर्छ । ९५ प्रतिशतभन्दा कम देखियो भने त्यो व्यक्तिमा कुनै समस्या भएको बुझिन्छ । अक्सिजन सतह ९२ वा ९० सम्म झर्यो भने तुरुन्त चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्नुपर्दछ । होम आइसोलेन तथा क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूले अक्सिमिटरको सहायताले अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्नु उपयुक्त हुने हुने बिज्ञ डाक्टरहरु बताउछन ।
होम आइसोलेसनमा सास फेर्न गाह्रो भए यी १६ सुझाव पढ्नुहोस्
के हो पल्स अक्सिमिटर?
शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर जाँच्नका लागि बजारमा एक उपकरण उपलब्ध छ, अक्सिमिटर । अक्सिमिटरको सहायताले हृदय र फोक्सोको कार्यलाई कुनै असर परे–नपरेको र रगतमा हुने अक्सिजनको अभाव कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा जानकारी पाउन सकिन्छ । यसलाई औँलामा राखेर रगतमा रहेको अक्सिजनको मात्रा परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसले फोक्सोमा निमोनियाको मात्रा बढे–नबढेको देखाउने र थप जोखिम हुनुपूर्व नै सचेत गराउँछ ।
औँला बीचमा राख्दा यसभित्र एक किसिमको बत्ती बल्छ । यसले रक्तकोषको रङ र त्यसको हलचललाई देखाउँछ । त्यही आधारमा अक्सिमिटरले अक्सिजनको अवस्था देखाउछ ।
अहिले यसको माग ह्वात्तै बढेको छ। विशेषगरी होम आइसोलेनसमा बसेकाहरू अक्सिमिटर किन्न आउने गरेको औषधि पसल सञ्चालक बताउँछन् । माग बढेसँगै कालोबजारीसमेत बढेको छ। फार्मेसी सञ्चालकहरूले फरक-फरक मूल्यमा अक्सिमिटर बेच्न थालेका छन्।
त्यस्तै अनलाइन बजारमा रु. ६ सयदेखि पाँच हजारसम्मका अक्सिमिटर बिक्रीमा किन्न पाइन्छ ।
प्रयोग कसरी गर्ने अक्सिमिटर?
☑️ अक्सिमिटरलाई दिनहुँ प्रयोग नगरौं ।
☑️ यदि नेल पोलिस लगाउनुभएको छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस् ।
☑️ एउटै हातको औलामा मात्र नभई हातको अर्को औलामा पनि मीटर लगाएर जाँच गर्नुहोस् ।
☑️ दुई तीन पटक परीक्षण गर्दा जुन सबैभन्दा बढी रिडिङ आउँछ, त्यसैलाई सही मान्नुहोस् ।
☑️ करिब ७ मिनेटसम्म हिँडडुल गरौं । यसपछि अक्सिमिटरको प्रयोग गरेर लेभल जाँचौं ।
☑️ यदि हिँडडुल गरेपछि अक्सिमिटरमा अक्सिजनको लेभल चार प्रतिशतसम्म कम देखियो भने बाँकी परीक्षण जरुरी हुन्छ ।
☑️ यदि हिँडडुलपछि लेभल ९४ माथि आउँछ भने चिन्ता गर्नुपर्ने केही छैन, तपाईं ठीक हुनुहुन्छ ।
Tags: Corona Virus #Covid19Lung HealthOxygen